अष्ट्रेलियामा आइफोन र डिएसएलआर क्यामरा फल्दैन साथी ! - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा आइफोन र डिएसएलआर क्यामरा फल्दैन साथी !
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ आश्विन २०७४, मंगलवार ०४:१६ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थी काम र कलेजको चेपुवामा परिरहेका हुन्छन् । नेपालमा परिवारसंग बसिरहेका उनीहरु यहाँ आएर दिन रातको संघर्षमा होमीदा बयान गर्न नसक्ने मनको पीडा बोकेर हिडिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा बस्ने साथीहरुसंग उनीहरु फोनमा केही आत्मियता, केही मनको बह पोख्न चाहन्छन् । तर नेपालबाट फोन गर्ने अधिकांश साथीहरुले भने यहाँ बस्नेहरु पैसा र सुखमा भुलिरहेको ठान्छन् र कतिपयले आइफोन , डिएसएलआर क्यामराको माग गर्छन् ।
यही तितो यथार्थतालाई चित्रण गरेर अष्ट्रेलिया बसिरहेका युवाहरुले एउटा छोटो भिडियो बनाएका छन् । Bitter Truth Nep//Aus नामको यो भिडियोमा सागर धमला क्षेत्री र अविरल धामीले अभिनय गरेका छन् । भिडियोलाई बाबा फिल्म्स प्रोडक्सनले पोस्ट प्रोडक्सन गरेको हो ।
Previousस्पनेले इजरायललाई १–० ले हरायो !
Nextअमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भीषण आगलागी, दशको मृत्यु